Na Arịa Ụlọ Tinyere Fan
Na Arịa Ụlọ Tinyere Fan Ejiri tebụl Brise mee echiche nke ọrụ maka mgbanwe ihu igwe na ọchịchọ iji ndị fan kama ikuku ntụ. Kama ịfụ ikuku siri ike, ọ na-elekwasị anya n ’obi dị jụụ site n’ịgbasa ikuku ọbụna mgbe ị jụsịrị ikuku ntụ oyi. Site na Table Brise, ndị ọrụ nwere ike ịnweta ikuku ma jiri ya dị ka tebụl dị n'akụkụ otu oge. Ọzọkwa, ọ na-emetụta gburugburu ebe obibi nke ọma ma na-eme ka mbara mara mma.
Aha Mmeghe Ihe oru ngo a bu njem ichoro ihe banyere uzo Izoputa ya (isi okwu n’aho 2019) n’uche na ntughari, gosi mgbanwe, ihe ohuru na ihe si na ya puta. Ihe nlere niile dị ọcha ma nwee ntụsara ahụ ikiri, na-emegide eziokwu na-ezighi ezi site na mgbapụ. Ihe onyonyo a na agbanwe agbanwe oge obula, ihe ogugu n’iru ihe nlere anya bu ihe anabataghachi, dika onodu ọnọdụ di. Capezọ mgbapụ nwere ihe dị iche iche, ịkọwa ya na echiche ya dịgasị na-atọ ọchị ma ọ bụ nke siri ike.
Tọọzdee 23 Juun 2022
Wenezdee 22 Juun 2022
Tiuzdee 21 Juun 2022
Fluid Cube and Snake Smart Arịa Satọdee 2 Julaị
Bubble Forest Ịkpụ Ọhaneze Fraịdee 1 Julaị
The Cutting Edge Na-Ezipụta Ọgwụ Ahịa Tọọzdee 30 Juun
Na Arịa Ụlọ Tinyere Fan Aha Mmeghe Mgbanaka Nhazi Mgbasa Ozi Ice Cream Kalama